-रुद्र पंगेनी हाम्रो देशका लगभग सबैजसो शैक्षिक संस्था एउटै सपना बेच्छन् । त्यो हो— विदेशिन जान्ने÷सक्ने बनाउने । कयौैँ स्कुल–कलेजका नाउँ पनि तथाकथित इन्टरनेसनल छन् । सरकार, संघ–संस्था वा विदेशी
-रेवतीरमण खनाल भर्खर मात्र नारायणहिटी दरबारकै विशेष जाहेरी विभागमा सरुवा भएको थिएँ । आमनागरिकले आफ्ना दुखेसा र अन्यायमा परेका वेदना बिसाउने दरबारको आधिकारिक निकाय थियो त्यो । दैनिक करिब तीन
आँखाको पट्टी खोलौ, २७ वर्षदेखि राष्ट्रियतामा ठट्टा गर्नेहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो
डा. युवराज संग्रौला राष्ट्रियतामा ठट्टा: नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने व्यापार हो ? राष्ट्रको ‘समृद्धि र स्वाभिमान’ नै अहिले जनताले पटक-पटक अभिव्यक्त गरिरहेको चाहना हो, भलै सबैले
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, धार्मिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलनका संवाहक पनि हुन् !
-डा.सुधिन्द्र शर्मा पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणका प्रणेता थिए । यद्यपि, उनको पहिचान त्यतिमै सीमित छैन । उनी हिन्दु संस्कृति विस्तार गर्ने व्यक्तित्व पनि थिए । र, जहाँ–जहाँ विजय हासिल गरे,
राष्ट्रिय विभुति शंखधर साख्वाले यसरी गरीवलाई ऋणमुक्त गराए र नेपाल सम्बत् चलाए
नेपालका राष्ट्रिय विभूति तथा नेपाल संवतका प्रवर्तक शंखधर साख्वाको चर्चा प्रायः नेपाल सम्वतको दिन हुने गर्छ । उनी काठमाडौका एउटा ब्यापारी हुन् । उनी एउटा ब्यापारी भए पनि समाजसेवी थिए
यसरी मनाउछन् जनजातिले तिहार
गणेश राई बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश नेपालको मुख्य चाड पर्वमध्येकै हो तिहार । मुलुकमा १२५ जातजाति छन्, तीमध्ये सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति छन् । एउटै नामबाट चिनिने चाडपर्वलाई
बलिराजा र द्यौसी भैलोको प्रसंग
– महेश्वर श्रेष्ठ नेपालका धेरै जसो पहाडी समुदायमा लक्ष्मी पूजाको सांझ केटीहरु जम्मा भई छिमेकीका घरघरमा भैली गीत गाउँदै भैलो माग्न जाने चलन छ । त्यसको भोली पल्ट अर्थात गोवर्धनपूजा
कम्युनिस्टहरू पनि देउवा भन्दा केहि फरक देखिएनन्
राजनीति स्थिति बसाउने विधा हो तर नेपालका बेथिति बढाउने कारक बनेको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद्मा विनाविभागीय मन्त्रीको संख्या सायद संसारमै सबैभन्दा धेरै होला । देशको कार्यकारी प्रमुखले नै
दिपेन्द्र हातमा प्लेट लिएर खाँदै आएर भन्नुभयो -तिमिले मेरो बिहे भोज खान नपाउने भयौ
-तात्कालिन राजदरबारका पूर्व प्रमुख सचिव रेवतीरमण म दरबारमा भएकै बेला २०४५ सालतिर दरबार मार्गको नाङलो रेस्टुराँमा युवराज दिपेन्द्र र उहाँका केही साथी तथा उहाँका अङ्गरक्षकहरुले पेय पदार्थ लिँदै र खाना
यी हुन बहुदलीय ब्यबस्थामा नेपाल बेच्ने नेताहरु ? के के बेचे पढ्नुस
–हस्तवहादुर केसी नेपालका नेताहरुले बिभिन्न समयमा देश नबेचेको भए , नेपालका नदी नालाहरु भारतदाई नबेचेको भए, आज यसरी नेपालको भूभाग पानीले डुप्ने थिएन । सैयौ नेपाली नागरिगहरुले आफ्नै देशका नेताका
कांग्रेस र एमालेलाई सिध्याउन साम्राज्यवादी शक्तिहरूको इसारामा वाम गठबन्धन !
साम्राज्यवादी शक्तिहरूले एकपटक फेरि नेपाली जनमतमा चक्मा दिन खोजेका छन् । संसद र प्रदेशको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमाले वरिपरि केन्द्रित रहेर फ्याँकिएको ‘वाम’ पाशा र कांग्रेसलाई केन्द्र बनाएर हुत्याइएको ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’को